Isitolo esidayisa yonke impahla Aluminium Strip yabakhiqizi bephrofayili nabaphakeli I-Aluminium entsha
Umugqa we-Aluminium usetshenziselwa kabanzi iphrofayili ekukhanyeni kwe-LED nazo zonke izinhlobo zezinsiza njengoba i-aluminium isisindo esincane kunezinye izinsimbi kepha ikhwalithi ephezulu nendawo engcono. Sithumela i-0.35 X 42mm eJalimane kanye no-1.2 mm X 8 mm siye e-Italy njalo.
Sikhiqiza i-aluminium Coil kusuka ku-ingot yi-SMS Rolling Mill evela eJalimane naseKampf Slitter. Ububanzi beminithi bungu-8 mm kanti ukujiya kweMin kungu-0.1 mm womugqa onazo zonke izinhlobo zengxubevange nentukuthelo.
Igama I-Aluminium Strip
Ingxubevange 1100 1050 1060 3003 3105 5052 8011
Ubukhulu 0.1mm - 5mm (ukubekezelelana: ± 5%)
Ububanzi nokubekezelelana 8 mm - 1500 mm (ukubekezelelana: ± 1.0mm)
Isisindo I-300 -600kg ngekhoyili yomqulu ngamunye (noma eyenziwe ngezifiso)
Isicelo isetshenziswe kuzo zonke izinhlobo zezesekeli
Impendulo: Asibona nje umkhiqizi nomthengisi we-Aluminium Foil,
kodwa futhi kukhiqizwa ishidi le-aluminium, ikhoyili ye-aluminium, indingilizi ye-aluminium, ikhoyili ehlanganiswe ngombala ne-aluminium ishidi.
Langaphambilini Indlu Aluminium Ucwecwe
Olandelayo: Umugqa we-8011 Aluminium wePayipi le-PP-AL-PP
Umugqa we-Aluminium welayisense kanye nepuleti yezimpawu
Isibuko sesibuko se-Aluminium Strip
Umugqa we-1100 Aluminium wengilazi engenalutho
Umugqa we-Aluminium Roll